ရှာမှရှားတဲ့ သတင်းစာ | Bo ဘိုဘိုလန်းစင်
« စာကြည့်တိုက် (ဝါ) ပွင့်လင်းလာသောခေတ် အတွက် အဖိုးတန်ပညာသော့
လွန်သည့် နောင်တမရစေလို »
ရှာမှရှားတဲ့ သတင်းစာ	17Dec12
စာမွေ့သူတဦး ကျေးဇူးပြုသည် .. လူထုခေါင်းကြီးနှင့် ဝေဘန်ချက်များ
ဒီမိုကရေစီ၏ အခြေခံသည် ပြည်သူ့ဆန္ဒမဲဖြင့်တက်သည့် အစိုးရဆိုပါလျှင်လည်း မဲဆန္ဒရှင်တို့၏ အဝေဖန်ကိုခံကြရသည်။ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာဖြင့်လခပေး၍ ထားရသောအရာထမ်းအမှုထမ်းများအားလည်း အခွန်ထမ်းပြည်သူတို့က လွတ်လပ်စွာဝေဖန်ပြောဆိုရေးညွှန်ပြနိုင်ပေသည်။ယခုသော်ကား”အားလုံးကောင်းပါသည်ခင်ဗျား” ဟူ၍ထောက်ခံမှုကလွဲ၍ ဘာဝေဖန်ချက်ကိုမှ လက်မခံဟုဆိုပါလျှင် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ
ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ ဖက်ဆစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟူ၍ ကြေညာရန်ရှိတော့သည်။
ဒီမိုကရေစီအမည်ခံတိုင်းပြည်များ၌ ရေးဆွဲထားသော ဥပဒေများသည် ကြွယ်ဝသူများအဖို့ချည်းဖြစ်၏။ကြွယ်ဝသူဖြစ်ခဲ့လျှင် တရားရုံးတခုတွင် ရှုံးသော်လည်း အထက်ရုံးသို့တက်၍ တဆင့်မှတဆင့် အမြင့်ဆုံးသောရုံးသို့တက်နိုင်၏။ ထိုကဲ့သို့တက်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့် အနိုင်ရသောအမှုသည်များလည်း မြောက်များစွာရှိ၏။လူမွဲဖြစ်ခဲ့လျှင် တရုံးတွင်ရှုံးကာမျှနှင့် တခါတည်းရှုံးရချေတော့မည်။ သို့ဖြစ်၍ ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်များတွင် ဥပဒေများသည် ကြွယ်ဝသူများအတွကိဖြစ်နေ၍ ထိုကဲ့သို့ဖြစ်စေနိုင်ရန် တမင်တကာရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်ဟူ၍ ကျွန်ုပ်တို့ကဆိုလိုက်ရပေသည်။ အကြောင်းမူကား ၎င်းဥပဒေများမှာ လူဆင်းရဲများရေးဆွဲနိုင်ခွင့် ရှိကြသည်မဟုတ်ဘဲ ကြွယ်ဝသူများအတွက် ကိုယ်စားလှယ်ပြုသောလူများက ရေးဆွဲထားကြခြင်း ဖြစ်ပေသောကြောင့်တည်း။
ပြည်သူလူထု၏ ဆန္ဒနှင့်ဆန့်ကျင်သောခေါင်းဆောင် နိုင်ငံရေးသမား အဖွဲ့အစည်းသည် တနေ့သောအခါ ကျဆင်းရမည်သာဖြစ်သည်။ ပြည်သူလူထုကိုအခြေခံခြင်းမဟုတ်သော လုပ်ငန်းမှန်သမျှမှာ ဒီမိုကရေစီထွန်းကားသည်နှင့်အမျှ ကျဆုံးရမည်ဖြစ်ရာ လမ်းလွဲကိုလိုက်မိမှားနေလျှင် အမြန်ဆုံးပြင်၍ လူထုဆန္ဒဖြင့် ရပ်တည်ခိုင်မြဲကြဖို့ သတိပေးနှိုးဆော်လိုက်ပါသည်။
လူထုသတင်းစာခေါင်းကြီး။၂၂ -၅ -၁၉၅၈ မှ
ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးသည် လူသားတိုင်း၏အခွင့်အရေးကြီးတခုဖြစ်၏။သွေးစွတ်သောနှလုံးသားတိုင်းတွင် လွတ်လပ်စွာထွန်းတောက်နေရမည်ဖြစ်၏။ လူသားတိုင်း၏အချစ်ဆုံးသော
အရာတခုလည်းဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့်ကမ္ဘာ့လူသားတိုင်းနှလုံးသည်းပွတ်မှ သွေးပေါက်သွေးစက်များ စီးယိုကျဆင်းလာသည့်တိုင်အောင် ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးကို ကာကွယ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြ၏။”မတော်တရော်”တွေချည်းလုပ်နေကြပါက ဒီမိုကရေစီသည် နံမည်အပျက်ကြီးပျက်ရပေတော့မည်။တကဲ့ဒီမိုကရေစီသမားများက ”ဒါဒီမိုကရေစီတဲ့လား” ဟုမေးငေါ့ခြင်းခံကြရပေလိမ့်မည်ဖြစ်သတည်း။
မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို အမှန်တည်းဟူသော သစ္စာတရားသည် အခိုက်အတန့်အားဖြင့် တိမ်မြှပ်၍ နေရတတ်သော်လည်း တချိန်တွင်ကား အင်နှင့်အားနှင့် ထွန်းလင်းတောက်ပရမြဲပင်ဖြစ်ပေသည်။
လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့် လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ခွင့် လွတ်လပ်စွာစည်းရုံးခွင့်တည်းဟူသော လူ့အခွင့်အရေးများသည်လည်း သဘာဝကျ၍ တရားသည်သာမှန်ပါက ဘယ်ကဲ့သို့သော ဖောက်ပြန်ရေးသမားက အဘယ်မျှနှောင်ဖွဲ့သည်ဖြစ်စေ ဖျက်ဆီးသည်ဖြစ်စေ တိတိကျကျ ပြည့်ပြည့်၀၀ ခံစားခွင့် ပေါ်ပေါက်ရဦးမည်သာဖြစ်သတည်း။
နိုင်ငံရေးဆိုသည်မှာ ကိုယ်ယုံ၍ကိုယ့်စေတနာအလျောက်ရွက်ဆောင်ကြသည့်ကိစ္စဖြစ်သည်။ဤကိစ္စမျိုး၌ ယနေ့အဖြူပါဟုပြောနေပြီး နက်ဖြန်တွင်အမည်းပါဟု ပြောလာသည်ဆိုပါလျှင် ထိုသူသည်
မိမိကိုယ်မိမိ ဘယ်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိရသည်ဆိုခြင်းကို မစဉ်းစားမိသောကြောင့်သာလျှင် ဤလိုပေါ့ပေါ့တန်တန်မျောက်ခုန်သလိုခုန်ပြဝံ့ခြင်းဖြစ်တန်ရာသည်။ လူဟူသည်ကား ဘယ်သင်းကောင်း၏ ဘယ်သင်းကမကောင်းဆိုသော ယုံကြည်ချက်ရှိသည့် သတ္တ၀ါမျိုးဖြစ်သည်။ဤယုံကြည်ချက်ရှိခြင်းနှင့်အညီသည်ပင်လျှင် သွားလာလှုပ်ရှားတွေးတော ဆင်ခြင်မှု တွေ့ထိဆက်ဆံမှုများကိုပြုကြေခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့်ယုံကြည်ချက်သည်လူ့အဖို့အသက်ထက်အရေးကြီးပေသည်။ယုံကြည်ချက်တခုသည် လူတယောက်၏ပဲ့နှင့်တူသည်။လူတသက်တာမိမိလှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှကို ထိုယုံကြည်ချက်ကသာလျှင်ပဲ့ပြင်
အစိုးရအာဏာရသူများက အာဏာဖြင့်နိုင်ထက်စီးနင်းလုပ်ခြင်းများ၊ခါးပိုက်ဆောင်တပ်နှင့် လက်နက်ရှိသူများက တရားဉပဒေကို ချိုးဖောက်ခြင်းများပြုချေသော် အမှားပြုသူ မတရားပြုသူများကို
ကျွန်ုပ်တို့ပြည်သူများက အပြစ်မြင်ကြ လူထုနည်းဖြင့် အရေးယူကြရမည်ဖြစ်သတည်း။ ။
ပရိယာယ်ကိုအထပ်ထပ်သုံးနေမည့်အစား၊မှားယွင်းခဲ့သမျှကိုပြင်ဆင်ပြုပြင်ဖို့လိုအပ်လေပြီ။ တိုင်းပြည်ဧ။်ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့်ရသည်ဆိုခြင်းမှာ ကြီးမားလှသည့် တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ရာ နုံချာသောဆေးဆရာကဲ့သို့သဘောထားပြီးမှားယွင်းလျှင် လည်းမထောင်းတာဟုသဘောမထားသင့်ပေ။ပြည်သူတို့ ခံရသည့်ဒဏ်မှာကြီးမားလှသည်ဖြစ်ရာ
မူလကတည်းက မမှားဖို့ မှားပြန်လျှင်လည်း ပြင်နိုင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်း စေတနာကောင်းနှင့်သတိပေးလိုက်ပါသတည်း။ ။
ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးကိုများများကြီးပေးမည်။ပြည့်ပြည့်ကြီးပေးမည်ဟုကြံရွယ်ပါလျှင် ၁၀နှစ်၁၀မိုး ကာလကပြည်သူလူထုဘယ်လိုနေခဲ့ရသည်၊ အတိုက်အခံများ
ဘယ်လိုအသက်ရှုခဲ့ရသည်၊သတင်းစာဆရာများ စာရေးဆရာများဘယ်ပုံခံခဲ့ရသည်များကိုအစိုးရတို့ဆင်ခြင်သင့်ကြပေသည်။ဒီမိုကရေစီထူထောင်ရေးတွင် ဒီမိုကရေစီနှင့်
မနီးစပ်သော ဉပဒေများကိုရုပ်သိမ်းဖယ်ရှားဖို့မှာ ရှေ့ဆုံးပိုင်းကအစီအစဉ်တရပ်ဖြစ်သင့်ကြောင်း သို့မှပင်ပြည်သူလူထုအားထားမှု နှင့်နီးစပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း အစိုးရအား
ပြည်သူလူထုအလိုရှိသည်မှာ ဆရာတော်ကြီးများမေတ္တာရပ်ခံထားသည့် ပြဿနာရပ်များကို လက်နက်နှင့်ဖြေရှင်းရေးမဟုတ်သော ဒီမိုကရေစီနည်းအရဖြေရှင်းရေး၊
ငြိမ်းချမ်းရေးနည်းပင်ဖြစ်ပေရာ ပြည်သူလူထုဧ။်ဆန္ဒကို ဆန့်ကျင်သူများသည် ဗြုံးကနဲလတ်တလောအားဖြင့် အာဏာရချင်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း ရေရှည်တွင်ကား ပြည်သူ့ဆန္ဒကို
ရနိုင်ဖို့ ဝေးသည်ဖြစ်ကြောင်း သတိရှိကြဖို့ လိုလှပေသည်။
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွင် မည်သည့်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းမှ နှစ်ပေါင်း ၄၀ အာဏာရနိုင်မည်ဟုမဆိုနိုင်ပေ။မည်သို့သောဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်သည့်နည်းများကိုပင် အစွမ်းကုန်သုံးသုံး မည်သို့သော ငွေကြေးများကိုရှာဖွေပြီး သုံးသုံး အာဏာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်သူများသည် မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မှကြာကြာအစိုးရမဖြစ်နိုင်။လူထုဆန့်ကျင်ရေးသမားများဖြစ်ပြီး လူထုဧ။်ဒဏ်ခတ်ခြင်း ကိုတနည်းမဟုတ်တနည်းခံရစမြဲဖြစ်လေသည်။ အာဏာရ ပါတီက အခွင့်အရေးများကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခြင်းများမှာ စင်စစ်အားဖြင့် ဒီမိုကရေစီကိုရိုက်ချိုးခြင်းသာဖြစ်သည်။ တင်းမာမှုကိုဖန်တီးခြင်းလည်းမည်သည်။တရားမျှတမှုနှင့် ဥပဒေအုပ်စိုးရေးကို ဖျက်ဆီးရာလည်းရောက်သည်။
“အာဏာအလွဲသုံးစားမပြုရေး”။လူထုသတင်းစာခေါင်းကြီး (၉-၁၁-၁၉၆၀) မှ
ရာဇ၀တ်မှုခင်းတခုခုအတွက်အရေးယူစရာအကြောင်း ရှိလျှင်သက်ဆိုင်ရာပုဒ်မနှင့်တိုက်ရိုက်အရေးယူဖို့သာရှိပေ သည်။ထိုပုဒ်မနှင့်အရေးယူလျှင်အာမခံပေးလိုက်မည်ဖြစ် သောကြောင့် ပုဒ်မ၅နှင့် အရေးယူရပါသည်
ဆိုသော အတွေးအခေါ်မျိုးကားမရှိသင့်ကြတော့ပေ။” အမှုနောက်မှ ရှာ၊လူကိုအရင်ဖမ်းလိုက်”ဆိုသည်မျိုး၊စိတ်မချ၍ပုဒ်မ၅နှင့် ဖမ်းထားရသည်ဆိုသည့်အကြောင်းပြချက်မျိုးသည် ဒီမိုကရေစီအာမခံချက်ပေး၍ တက်လာသောအစိုးရလက် ထက်တွင် လုံးဝမရှိသင့်တော့ပေ။
“လူ့ရာဇ၀င်ကို ဘယ်တော့မှ မသုံးသပ်သူများ”
ခက်လိုက်သည်မှာ အရင်းရှင်တို့အသိုက်အ၀န်း၌ လောဘဇောတိုက်၍ လောဘသာလျှင် လွှမ်းမိုးနေသည့် အခါ ဘယ်ရာဇ၀င်သင်ခန်းစာကိုမှ မရယူနိုင်သော လူမိုက်များက ဟောတယောက် ဟောတယောက် ပေါ်ထွက်လာတက်လေသည်။ ဤလိုလူမိုက်တွေသည် ပိုက်ဆံရှိ၍ ဒီမိုကရေစီအထိ ၀ယ်ယူလာနိုင်သည့်အခါ လူ့ရာဇ၀င်၌ သွေးချောင်းစီးရခြင်း မကြာခဏဖြစ်နေရခြင်း ဖြစ်လေသည်။ ထို့ကြောင့်ဤကမ္ဘာမြေပေါ်မှ အရင်းရှင် စနစ် မကွယ်ပျောက်မချင်း တကယ်တန်းငြိမ်းချမ်းရေး နှင့်တကယ်တန်း လုံခြုံရေးတို့ မရှိမည်မှာကား သေချာလှ ပါသတည်း။
အမျိုးသားနေ့နှင့်အတူ ယနေ့အမျိုးသားရေးပြဿနာများကို ကျွန်ုပ်တို့မျက်စေ့မှိတ်ထား၍မဖြစ်သေးပေ။ ကျွန်ုပ်တို့တမျိုးသားလုံးယနေ့ရင်ဆိုင်နေရသောပြဿနာကြီးများ ရှေ့တွင်မားမားကြီး
ရှိ၍ နေသေးသည်မဟုတ်လော။ ကျွန်ုပ်တို့၏အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်မှုကို ခြိမ်းခြောက်၍နေသည့် စစ်ရေးကျူးကျော်မှုများ နယ်ချဲ့သမားအန္တရာယ်များ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးတွင် ၀င်ရောက်ချယ်လှယ်
သွေးစုတ်နေသည့် စီးပွားရေးမလွတ်လပ်မှုများရှိသေးသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ယနေ့ညီညွတ်နေသည့် စည်းလုံးမှုမျိုးနှင့််ပင် စစ်ရေးကျူးကျော်မှု စီးပွားရေးချုပ်ချယ်မှု ဒီမိုကရေစီရေးဆုံးရှုံးမှု
ပြည်တွင်းမငြိမ်းချမ်းမှုနှင့် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းမှုများကို မရမနေတောင်းဆိုတိုက်ခိုက်ယူငင်ကြပါစို့။
အမျိုးသားတွေညီညွတ်မှ အမျိုးသားလွတ်လပ်ရေးကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်နိုင်သည်။အမျိုးသားလွတ်လပ်ရေး ခိုင်မြဲမှ အမျိုးသားပညာရေး၊ သခင်ပညာရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်မည်ဖြစ်ရာ အမျိုးသား နေ့ကြီးကျင်းပနိုင်ရေးကို အမျိုးသားတိုင်းအားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်းသင့်လှပါသတည်း။
အောက်ဆုံးလွှာတွင်ဒုက္ခအမျိုးမျိုးခံနေကြရပြီဖြစ်သောလူထုမည်မျှဆင်းရဲတွင်းနက်နေပြီ မည်သို့ခံစံနေကြရပြီဆိုသည်ကို အစိုးရသိအောင်လုပ်နိုင်ရေးမှာ အရေးကြီးလှသော ပြဿနာတရပ်
ဖြစ်လာတော့သည်။ ယနေ့လူလောကသည် ထိုအောက်ဆုံးလွှာကလူတို့ ခံနေရသည်များကို အထက်လူတို့ကသိရှိပါမှ သက်သာရာရရှိအောင် စီမံနိုင်ပါမှ သာယာသင့်သလောက်သာယာနိုင်မည်ဖြစ်ရာ ဤသို့ပင်လျှင်ဘယ်သူတွေဘယ်လောက် ဆင်းရဲ၍ဘာတွေဘယ်လိုဖြစ်နေသည် မသိသူများအရာရှိလုပ်နေလေသမျှယခုအတိုင်းပင် ကမောက်ကမလောကကြီးအဖြစ်နှင့်လွတ်လပ်စွာမှငတ်ပြတ်ခွင့်မရှိ
ငတ်ရမွဲရပါမို့လားဟု ဓါးပြရိုက်ခံရသည့်ခေတ်ဆိုးနှင့် တိုး၍သာကြုံကြိုက်နေကြရမည်ဖြစ်ပါသတည်း။
လူထုဒေါ်အမာ လူထုသတင်းစာခေါင်းကြီး(၇-၇-၁၉၅၆) မှ
အလုပ်သမားလယ်သမားကို အလုပ်သမားလယ်သမားဟူ၍သဘောထားပြီး ၎င်းတို့၏လုပ်အားကိုတန်ဖိုးကြီးကြီးထားကာ တိုင်းပြည်အတွက်ပါဝင်တည်ဆောက်စေရန်အရေးကြီးလှပေသည်။ အလုပ်သမားလယ်သမားကိုပါတီအရေးအတွက်လည်းအသုံးချဦးမည် ကိုယ့်ပါတီကို မထောက်ခံဟုထင်လျှင်ခွဲခြားနှိပ်ကွပ်မည်ဆိုပါက ဗမာပြည်၏တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ၌အကြီးအကျယ်
လူထုဒေါ်အမာ။လူထုသတင်းစာခေါင်းကြီး (၃၀၊၅၊၁၉၅၆) မှ
ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပြီဆိုလျှင် သာသနာ့ဝန်ထမ်းရဟန်းသံဃာသူတော်ကောင်းတို့သည်လည်း ကင်းအောင်လွတ်အောင်နေပါသည်ဆို၍နေမရ။ပစ်သမျှခတ်သမျှအကြား၌ အသက်ဆံဖျားရှိရခြင်း၊သူသေ ငါသေသူသတ်ငါသတ်ဆိုသည်များကိုမည်မျှရွံကြောက် စက်ဆုတ်သော်လည်းရှောင်ကွင်း၍မရခြင်းများရှိရသည် ချည်းဖြစ်လေသည်။ ထို့ကြောင့်လည်းရဟန်းတော်များကပါပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲကြပါ။ ဘုရားအလိုတော်ကျစေ့စပ်ဆွေးနွေးဖြေရှင်းခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းကြပါ။ လက်နက်စွဲကိုင်မှုကိုစွန့်လွှတ်ကြပါဟုမေတ္တာရပ်ခံပန်ကြားတော်မူလာကြရခြင်းဖြစ်လေသည်။ ဤပြည်တွင်းစစ်မီးကို လူရှင်ရဟန်းကြိုးပမ်းငြိမ်းသက်ကြမှအေးငြိမ်းသွားလိမ့် မည်အမှန်ဖြစ်လေသတည်း။
လက်နက်အားကိုးသူသည် လက်နက်ကိုဖက်၍အိပ်ရမှ စိတ်ချစ္ဂ္ဂာအိပ်ပျော်သည် ဆိုသကဲ့သို့ ၎င်းတို့ အဖို့ ပြည်သူ့ဆန္ဒကိုဆန့်ကင်သည်နှင့်အမျှ ပြည်သူ့မေတ္တာရေကိုမခံယူရသည်နှင့်အမျှ
လက်နက်ကို သာလျှင် ပို၍ပို၍အားကိုးသည့်စိတ်များ တိုးပွားပေလိမ့်မည်။ပြည်သူကသာလျှင်လက်နက်သည်ယခု ခေတ်မျိုး၌ဘာကိုမှမဖြေရှင်းနိုင်။ ပြဿနာများရှိသည် ဆိုက ငြိမ်းချမ်းစွာတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေ ရှင်းနည်းဖြင့် သာလျှင် ဖြေရှင်းရလိမ့်မည်။ လက်နက်တပ်ဆင်မှု စစ်တပ်ကြီးများဖွဲ့စည်းမှုသည် ပြည်သူတို့၏ သက်သာချောင်ချိမှုများခေါင်းပါးစေရန် စာသင်ကျောင်းအစားစစ်တန်းလျား ဆေးရုံမှ ဆေးဝါးအစား
ကျည်ဆံ အားကစားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအစား စစ်ဖိနပ်နှင့်ယူနီဖောင်းဖိုး တို့တွင်ကုန်ဆုံးပြုန်းတီးရသည် ဟူသောအသိဖြင့်တက်ကြွစွာကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်နေကြခြင်းဖြစ်လေသည်။
လူထုဒေါ်အမာ“ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူတကွနေကြပါစို့” လူထုသတင်းစာခေါင်းကြီး(၂၉၊၉၊၁၉၅၆)မှ
လူ့သမိုင်းတွင်လူကိုမည်သည့်ခေတ်အခါက ဖိနှိပ်ဟန့်တား ခဲ့ရာ၌ အောင်မြင်မှုရှိခဲ့ပါသနည်းဟုမေးလျင် လုံးဝမအောင်မြင်၊လူကိုဖိနှိပ်၍ရရိုးထုံးစံမရှိ ဟူ၍ပင်ဖြေရ ပေလိမ့်မည်။ဤအဖြေကို မဖြေလို၍မရ။
ယနေ့လူ့သမိုင်း သည်ပင်လျင်ဖိနှိပ်မှုတို့အောက်မှ ပေါက်ဖွားတိုးတက်လာ ရခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ထိုအဖြေကိုသာကြိုက်သည်ဖြစ် စေ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ လူစကားပြောသူတိုင်းဖြေရပေ လိမ့်မည်။ သို့သော်ဖိနှိပ်၍နေဆဲရှိကြသူများကမူ သူတို့ ကိုယ်သူတို့ သိကြားဟုထင်မှတ်နေကြလေသည်။ဘယ် ခေတ် ဘယ်အခါကမှမရခဲ့စေကာမူ ငါဖိနှိပ်လျှင်ရရမည် ဟုအထင်ရောက်၍နေကြလေသည်။
ထိုသူများအဖို့သနား ဖွယ်လည်းကောင်းသည်၊ ရယ်ဖွယ်လည်းကောင်းလှသည်။ ဖိနှိပ်တိုင်းသာလျှင်ပြားပြားဝပ်သွားကြလျှင် လူသားသည် ယခုတိုင် ကြေးခေတ် ကျွန်ခေတ်ကတက်လိမ့်မည်မဟုတ်သည်ကို
ထိုဖိနှိပ်သူတို့ မသိမြင်နိုင်အောင် မောဟဖုံးလွှမ်း ခြင်းမှာသနားစရာသာကောင်းတော့သတည်း။
လူထုဒေါ်အမာ-သတင်းစာခေါင်းကြီး-အထွေထွေဝေဖန် ချက်-“ရယ်စရာဖြစ်နေပြီ”(၂၊၆၊၁၉၅၆) မှ
ပြည်သူတို့အနေဖြင့် ဖိနှိပ်သည်ထက်ဖိနှိပ်လာခြင်းသည် အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားတို့ အကြောင်းပြသည်ကဲ့သို့ နိုင်ငံ တော်သာယာ၍ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးအတွက်ဟုမမြင်။အာဏာ ရရှိနေသူများဧ။် အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်သာဟုမြင် ကြလေသည်။ထို့ပြင်အာဏာဖြင့်ပိုမိုဖိနှိပ်ထားခြင်းသည် ထာဝစဉ် ရစကောင်းသလောဟုလည်းမြင်၍လာပေမည်။ သို့ဖြစ်လေရာယခုကဲ့သို့အုပ်စိုးသူလူတန်းစားအတွက်
ဥပဒေတမျိုး အအုပ်ချုပ်ခံလူတန်းစားအတွက်ဥပဒေတမျိုးစသည်ဖြင့် ဥပဒေအမျိုးမျိုးနှင့်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်၍စိုးမိုးနေမည့်အစား ငါတို့သည်ပြည်သူတို့က သဘောကျရွေးကောက်ထား သောပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြသည် ။ပြည်သူတို့ ဆန္ဒရှိသည့်အတိုင်းငါတို့လုပ်ဆောင်၍ပေးနေသည်ဟူ သောယုံကြည်ချက်ဖြင့် အုပ်စိုးသူများလည်း
လိပ်ပြာသန့်သန့် ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနိုင်ရန် ကြိုးစားပါ။ ပြည်သူအားလည်း ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် ထားနိုင်ရန်ကြိုးစားပါဟူ၍သာကျွန်ုပ်တို့က တိုက်တွန်းလိုလှသတည်း။
လူထုဒေါ်အမာ-တိုး၍ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်လာမှုများ-လူထုဂျာနယ်ခေါင်းကြီး အမှတ်၅၃(၁-၉-၁၉၅၄) မှ
ပြည့်သူ့ဆန္ဒပြပွဲများသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွက်မဟုတ်။ ပြည်သူလူထုဧ။် ကိစ္စ ကြီးဖြစ်ခြင်းကိုပြည်သူလူထုလည်းသိဧ။်။အစိုးရလည်းသိဧ။်။ရဲများပင်သိသင့်လောက်ပေသည်။ လက်နက်မကိုင်ဆောင်သော ပြည်သူလူထုအဖို့မှာ မိမိတို့ ဧ။်လိုအင်ဆန္ဒကိုရံဖန်ရံခါအစိုးရသိအောင်ဖော်ပြခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်အနေဖြင့် တကမ္ဘာလုံးတွင်ကျင့်သုံး လျက်ရှိကြဧ။်။သို့ရာတွင် ထိုကဲ့သို့ဆန္ဒပြကြရာ၌ သွေးထွက်သံယိုမဖြစ်စေဘဲ ငြိမ်းချမ်းစွာဖြစ်စေရန်မှာ အစိုးရ၌၎င်း၊ဆန္ဒပြကြသောပြည်သူလူထုအဖို့၌၎င်း နှစ်ဖက်စလုံးတွင် တာဝန်ရှိပေသည်။ ဤအတိုင်းမှန်ကန်လျှင်
အစိုးရသည် ဆန္ဒပြကြသော လူထုကို’ကိုင်တွယ်’မည့်ရဲအရှိများနှင့်ရဲသားများရွေးချယ် ရာတွင်အထူးသတိရှိဖို့လိုပေသည်။ ဖြစ်သင့်သိမှာကား သွေးဆူလျက်ရှိသောလူထုကို ကိုင်တွယ်မည့်
အမှုထမ်းများသည် ရိုက်ချင်နှက်ချင်လူများ၊စိတ်တိုသောလူများ ရိုင်ဖယ်သေနတ်ကို’ရာဇနှင်တံ’မှတ်ထင်တတ်သူများ၊ ထစ်ခနဲဆိုလျင်ပစ်ချင်ခတ်ချင်၍
‘လက်ရွ’လျက်ရှိသူများ မပါဝင်စေရဘဲ ပြည်သူလူထုဧ။် ရည်ရွယ်ချက်ကို နားလည်၍ ကိုယ်ချင်းစာတရားကပ်သူများဖြစ်ရမည့်ပြင် ဆန္ဒပြကြသော လူအုပ်ထဲတွင် မိမိတို့ဧ။်ညီအရင်း တူအရင်းသားရင်းများ (မယားပါသားမဟုတ်)ပါဝင်သည့် နှယ်ကြင်နာသောစိတ်ထားမျိုးရှိသည့်အမှုထမ်းများချည်း ဖြစ်စေရမည်။ ရဲအမှုထမ်းတို့မည်သည် လက်နက်မပါဘဲ ဆန္ဒပြသောလူထုကို ကိုင်တွယ်ရာ၌ အနည်းအကျဉ်းမျှ အပွန်းအပဲ့ခံဖို့လောက်ကို ၀တ္တရားတခုအနေဖြင့်သဘော ထားထိုက်၏။
ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံက ပုလိပ်များမှာ ပြည့်တံဆာခေါင်းများထံ ကမိုက်ကြေးခွဲ၍စားခြင်း၊ကစားဝိုင်း ဖဲဝိုင်းမှလစဉ်ကြေးယူ ၍စားခြင်းများကိုသာကြားသိရပြီး ဒါးပြတိုက်၍ သွားတိုင်ပါ သော်လည်း မိအောင်ဖမ်းနိုင်သည်မရှိ၊ကျောင်းသားတို့စီတန်းလှည့်လည်လျှင် မြင်းနှင့်တိုက်၍ ရိုက်နှက်ခြင်း၊ရဟန်းတော်များပါစီတန်းလှည့်လည်သည် ကို သေနတ်နှင့်ပစ်ခြင်းများပြုသည်ကို တွေ့ကြုံခဲ့ရခြင်းဖြစ် လေသည်။ယခုကား နယ်ချဲ့သမားလက်အောက်မှလွတ် မြောက်လေပြီ၊ အမျိုးသားအစိုးရ ဖွဲ့စည်းနိုင်ပြီးဖြစ်လေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ များသည်ဘယ်ကဲ့သို့သောရဲမျိုးဧ။်ဘ၀ကိုခံယူကြမည်နည်း ကိုလိုနီပုလိပ်များဧ။်ဘ၀ကိုပင်ဆက်လက်ခံယူမည်လော။ အရင်းရှင်နိုင်ငံများ၏ ပုလိပ်ဘ၀ကိုပင် ခံယူမည်လော။ ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှပုလိပ်များဧ။်ဘ၀ကိုခံယူမည် လော ဟူသည်ကိုစဉ်းစားသင့်လှသည်။ လူသည် ကိုယ့်ဘ၀တလျောက်၌ ငါဘာကိုလုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်ကို အလေးအနက်ပြန်လည်စဉ်းစားရိုးထုံးစံရှိသည်ချည်းဖြစ် သည်။ရဲသည်ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း၊ရဲသည်ပင်ပြည်သူတို့ဧ။် အားကိုးအားထားပြုရာ ရဲသည်ပင်ပြည်သူဆိုသည့် အဖြစ်မျိုးကို ဗမာနိုင်ငံမှရဲများ ခံယူသင့်လှပါသည်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဧ။် အမျိုးသားပိုင်ပစ္စည်းတစ်ရပ်ဖြစ်သော မြေပေါ်မြေအောက်ဘဏ္ဍာများကို တိုင်းတပါးအရင်းရှင်တို့ က ကမ္ဘာတည်သမျှကာလပတ်လုံး ၄င်းတို့ချည်းအပြုံး မပျက် စားသုံးခွင့်ရှိရမည်ဟူ၍ ဘယ်ကမ္ပည်းတွင်မှ ရှိနေ မည်မဟုတ်ပေ။ တခေတ်တခါကလူသူလက်နက်အင်အား တို့ဖြင့်ခြိမ်းခြောက်၍ လာရောက်အပိုင်စီးပြီး မတရားစာ ချုပ်များ တဖက်သက်ချုပ်ဆို၍ စားသောက်ဝါးမျိုနေကြ
ခြင်းသာဖြစ်ပေသည်။ ဤခေတ် ဤအခါမျိုး၌ ထိုကဲ့သို့ သောစားသောက်ဝါးမျိုမှုကို ၄င်းတို့စိုက်ထုတ်ထားရပါ သည်ဆိုသောအရင်းအနှီးတန်ဖိုးဆိုသည်များကို လျော်ကြေးအဖြစ်ပေးပါလျက် သိမ်းယူခြင်းကိုမခံနိုင်ဟု ဆိုလေလျှင် မခံနိုင်ဆိုသူသာလျှင် အဆိုးဖြစ်၍ ကိုယ့် ပစ္စည်းကိုယ်ပြန်၍သိမ်းသူက မဆိုးနိုင်ပေ။ အလားတူ လည်းသိမ်းယူကြရဦးမည်ဖြစ်ပေသည်။
နယ်ချဲ့စနစ်မရှိတော့လေဟန် မည်သူတွေက မည်မျှပင် ဖုံးကွယ်ရန်ကြိုးစားစေကာမူ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံ၌ စီးပွားရေး နယ်ချဲ့မှုကို အလူးအလဲ ခံရဆဲပင် ဖြစ်ပေသည်။
လူထုဒေါ်အမာ-လူထုသတင်းစာခေါင်းကြီး -၂၂၊၉၊၁၉၅၆ မှ
ဤမျှဆိုးဝါးနေပြီဖြစ်သော လူသတ်ဝါဒကြီးကို ပြည်သူတို့အနေဖြင့် လက်ပိုက်ကြည့်နေလို့မဖြစ်တော့ပြီ။ ဤလူသတ်ဝါဒဆိုးကို တခါတည်းစွန့်လွှတ်ကြရန် အပြင်းအထန်တောင်းဆိုမှဖြစ်ပေတော့မည်။ အမြို့မြို့အနယ်နယ်အရပ်ရပ်တို့တွင် လူသတ်ဝါဒကို ပြည်သူတွေက လက်မခံပြင်းထန်စွာရှုတ်ချသည်ဟု ရှုတ်ချပွဲများလုပ်ဆောင်ကြရပေလိမ့်မည်။ လူသတ်ဝါဒကန့်ကွက်ရှုတ်ချရေးစည်းဝေးပွဲများ ဗမာတပြည်လုံးတွင် လုပ်သင့်လှပြီ။ လက်နက်ဝါဒကိုစွန့်လွှတ်ကြပါတော့ဟု ဗမာပြည်သူတရပ်လုံးကတောင်းဆိုရမည့် အချိန်သို့ရောက်ရှိနေလေပြီ။
Filed under: guest column, history, media, politics	| 1 Comment	One Response to “ရှာမှရှားတဲ့ သတင်းစာ”	Feed for this Entry
Soe Tint on December 21, 2012 said:
Congratulations! I like your essay. I am one of those who have read ‘Ludu’ newspaper many years ago and admired and respected your grand parents and your uncles.
Reply	« စာကြည့်တိုက် (ဝါ) ပွင့်လင်းလာသောခေတ် အတွက် အဖိုးတန်ပညာသော့